कठै ! हामी नेपाली - Purwanchal Daily
२९ श्रावण २०७७, बिहीबार ११:३५ मा प्रकाशित
एक व्यक्ति दिर्घरोगका कारण हस्पिटल ल्याइन्छ, हस्पिटलको इमरजेन्सी वार्डको गेटमै, छ महिने ट्रेनिङ गरेका आफूलाई एमबीबीएस डाक्टर सरह ठान्ने एक कर्मचारीले पत्रकारले अन्तरवार्ता लिए झैं बिरामीलाई सोधपुछ गर्न थाल्छन् र बिरामीलाई ज्वरो आएको कारण देखाउँदै के कारण ज्वरो आएको हो चेक नगरी कोरोना संक्रमण भनेर फायलमा लेखिदिन्छन् । बल्लतल्ल बिरामी बेडमा सुताइन्छ केही समयपछि असली डाक्टरसाब आउनुहुन्छ आत्तिएका बिरामीको अभिभावकलाई कोही सहारा दिन आएको महशुस हुन्छ ।
तर, डाक्टरले बिरामी होइन त्यो फायल पो हेर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ– ‘तपाईको बिरामीलाई कोरोना भाइरसको शंका रहेछ अर्को हस्पिटल लानुहोस् ।’ उता बिरामीलाई अति गाह्रो भइसकेको हुन्छ । हतार–हतार अर्को हस्पिटल लगिन्छ त्यहाँ पनि पारा उही हो बिरामी बेहोस् हुन्छ । अभिभावक रूँदै÷कराउँदै सारा आफन्तलाई गुहार्न थाल्छन् । त्यतिकैमा एक ब्यक्ति भावी बनेर हस्पिटल सञ्चालकलाई विरामी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नभई अरू नै रोगी भएको जानकारी दिँदै सही उपचार गर्न अनुरोध गरिदिन्छन् । र, सञ्चालकले पनि सोही अनुरूप उपचार गर्न डाक्टरलाई निर्देशन गर्छन् ।
सही रोगको सही उपचार बल्ल शुरू हुन्छ । तर, उपचारको समय काटीसकेको हुन्छ । अन्ततः केही समय पछि मृत्युको शिकारमा पुग्छन् । सारा ब्रमाण्ड हल्लिए झंै हुन्छ । आफन्तले आक्रोश पोख्छन् । तर, के गर्ने, पावरको पछि कसको के लाग्छ र ! डाक्टर निर्दाेष देखाउन हस्पिटल टिमले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्छन्– ‘आज एकजना ब्यक्ति कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ ।’ भोलि सारा अखबारको हेडलाइनमा लेखिएको हुन्छ– फलानो मान्छेको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ सबै शतर्क बसौं…। कठै हामी नेपाली जनता, कहिले होला यस्तो कुराको अन्त्य !
Previous articleहार्दिकता मर्दै गएको हो त ?
Next articleकृष्ण भण्डारीको ‘राष्ट्र देव पशुपतिनाथ’सार्वजनिक
बैतडीः मास्क जथाभावी फाल्ने प्रवृत्तिले जोखिम